Accueil Ny fiainam-piangonana Ny fanompoam-pivavahana manaraka
Miarahaba antsika amin'ny anaran'ny Tompo!
Ny fanompoam-pivavahana arahina fandraisana ny fanasan'ny Tompo, eto @ FPMA MELUN, dia ny
@ 10 ora sy sasany
Fotoana amin'ny 19 jiona 2016
Manonona ny fiadanan'ny tompo ho amintsika mpianakavin'ny finoana,
Ny alahady 19 jona 2016 dia natokana ho alahadin'ny SLK, ny fanompoam-pivavahana dia atao ao @ 69 Avenue Maréchal Foch 77190 DAMMARIE les Lys ary hanomboka @ 10h30.
Ny mpitandrina Solo ANDRIANIMENJANAHARY no hitondra ny tenin'Andriamanitra ary hisy ny fandraisana ny fanasan'ny Tompo.
Lire la suite : Fotoana amin'ny 19 jiona 2016
Fotoana 8 novambra 2015
Mifampitaona isika ho amin’ny fotoam-pivavahana izay atao amin’ny 08 Novambra 2015.
Fotoan-dehibe ho an’ny tafo FPMA Melun io vanin’andro io satria andro natokana ho hifidianana ny diakona izay hiasa eo anivon’ny fiangonana mandritra ny roa (2) taona manaraka.
Lire la suite : Fotoana 8 novambra 2015
Fanovàna toeram-panompoam-pivavahana alahady Pentekosta
Écrit par Filohan'ny tafo
Mbola faly hatrany miarahaba antsika mpianakavy ny finoana.
Ialanay mpiandraikitra tsiny fa misy fanovana ny toerana hivavahan-tsika rahampitso Alahady Pentekosta.
Lire la suite : Fanovàna toeram-panompoam-pivavahana alahady Pentekosta
Manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika mpianakavin'ny finoana
Ny fotoana antsika ny alahady 1er Mey dia toy izao
Toerana hivavahana : Eglise Adventiste, 69 Avenue Maréchal Foch, 77190 Dammarie Les Lys.
Lire la suite : Culte 01/05/16
Fanamafisana fotoana fanopoam-pivavahana 30 Septembre
Mbola faly miarahaba hatrany antsika mpianakavy ny finoana.
Mampatsiahy antsika hatrany fa ny fanopoam-pivavahana fanokanana an’ireo Diakona vaovao, ary koa fametrahana ny Birao ny sampana tsirairay eto amin’ny fiangonan-tsika dia ho tanterahina ny Alahady 30 Septambra ho avy izao,
Lire la suite : Fanamafisana fotoana fanopoam-pivavahana 30 Septembre
Fotoana volana Desambra 2006
Mbola faly miarahaba antsika mpianakavy ny finoana.
Mandefa izao filazana izao aho ho fanamafisana ny filazana efa natao tao am-piangonana tamin’ny Alahady.
Lire la suite : Fotoana volana Desambra 2006
22 Febroary amin’ny 3 ora - Famangian’ny Birao Foibe, V3M nasionaly, KNPL
Aroso amin’ny 3 ora ny fotoanantsika amin’ny alahady 22 febroary izao.
Izany dia noho ny fandalovan’ireo vahiny (solontenan’ny Birao Foibe sy ny mpiandraikitra ny Komity Nasionaly Projet Laika) izay lavi-podiana.
Lire la suite : 22 Febroary amin’ny 3 ora - Famangian’ny Birao Foibe, V3M nasionaly, KNPL
Teny fanolorana ny Zaikabe nasionaly 2015
"Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra ety an-tany."
Io tenin’ny apostôly Paoly ho an’ny Kristiana tany Kolosia (tanàna ao amin’ny faritr’i Frygia, akaikin’i Laodikia sy Hierapoly, sahabo ho 200 km avy eo Efesosy) io no isan’ny nofidina ho teny faneva amin’izao Zaikabe sy Lasy SAP/KNPL hataontsika FPMA izao.
Lire la suite : Teny fanolorana ny Zaikabe nasionaly 2015
Fiangonana manaraka 25-04-2010
Ao amin’ny ERF, 8 av Thiers 77000 Melun
- amin’ny 4 ora
- Katekomena @ 2 ora
- Sekoly Alahady sy Antoko Mpihira @ 3 ora
Tsy hisy fanompoam-pivavahana amin’ny 01/11/15 izao nohon’ny Zaikabe nasionaly any Laroche sur Yon.
Ny fanompoam-pivavahana manaraka dia ny 08/11/15 ao amin’ny EPU, 8 avenue Thiers 77000 Melun.
Manomboka amin’ny 3 ora ny fotoana satria manao ny fifidianana Diakona isika.
Ny fotoanantsika manaraka izany dia ny alahady 25 oktobra 2105.
Pasitera Solo Andrianomenjanahary no hitondra ny fotoana.
Hanomboka amin’ny 4 ora ny fotoana.
Amin’ny 3 ora ny fianaran-kiran’ny chorale.
Amin’ny 3 ora ny Sekoly alahady.
Fotoanantsika alahady 7 jona
Mampahatsiahy antsika fa noho ny maha alahady fahadimy ny alahady 31 mey dia tsy misy fanompoam-pivavahana androany.
Ny fotoanantsika manaraka izany dia ny alahady 7 jona natokana ho fanateram-bokatra, izay ho tanterahantsika amin’ny alalan’ny valopim-bokatra.
Alahady 21 desambra
Fiangonana manaraka 13 desambra 2014
Fanompoam-pivavahana manaraka - 7 desambra 2014
Alahady 9 marsa
Fotoanan-tsika manaraka 25 Décembre 2011
Fiangonana manaraka 26 juin 2011
Fiangonana manaraka 19 juin 2011